January 14, 2015 at 1:35 at the
Ngiyabonga kakhulu umsebenzi wakho onzima kanye Plugin yakho OMKHULU!
Ngifisa sengathi ngabe umkhiqizo enkudlwana kulo New 2015 Unyaka!
Futhi ngicabanga ukuzedlula zonke uzovuma nami, ungathanda ukubona izibuyekezo oftener 😉
Siyabonga futhi, elinde lokhu izici ezesabekayo!
February 18, 2015 at 4:36 at the
Qhubeka nomsebenzi omkhulu, one! Ngakho thokozani Ngathola Transposh futhi izoqhubeka nokweseka Nokho wena ngikwazi. WENZE KAHLE!
Lesi yisikhathi sokuqala ngibona plugin yakho – I kumele anikeze Jer, kuyinto ehluke ngobuqili! Ngiye ngasebenza njengomhumushi iminyaka eminingi, futhi engimsebenzela lapha – uzozama umnikelo wami ngcono izinguqulo Danish of the page!